माछाबाट एकै सिजनमा पचहत्तर लाख आम्दानी
दाङ, साउन ११ गते । दाङको मोतीपुरका दीपक भण्डारीको धेरैजसो समय माछासँग बित्छ । तुलसीपुर नगरपालिका वडा नं. २० मा पर्ने मोतिपुरमा भण्डारीले माछापालन गर्दै आउनुभएको छ । घर नजिकै रहेको पोखरीमा माछाको हेरचाह गर्दैमा उहाँको धेरैजसो समय बित्छ । केही वर्ष पहिलेसम्म धान खेती हँुदै आएको जग्गामा पोखरी निर्माण गरेर भण्डरीले माछापालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो ।
त्यहाँको पाँच बिघाभन्दा बढी जग्गामा पोखरी निर्माण गरिएको छ । त्यो जग्गामा अहिले छवटा छुट्टाछुट्टै पोखरी निर्माण गरेर विभिन्न जातका माछापालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
माछापालन गरिरहेको जग्गा उहाँको मावली हजुरबुबा क्षेत्रबहादुर बस्नेतको जग्गा हो । चार वर्षदेखि हजुरबुबानातिको संयुक्त लगानीमा माछापालन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । लगानी बाजे नातिको भए पनि माछाको नियमित हेरचाह र पालनपोषण गर्ने काम दीपक भण्डारीले गर्दै आउनुभएको छ । ‘जग्गा त मावली बाजेको हो पहिले बाजे एक्लैले व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो तर, केही वर्षदेखि म पनि उहाँसँग मिलेर काम गर्दैछु’, भण्डारीले बताउनुभयो, ‘अहिले सबै दिन नै माछाको हेरचाह गरेरै बित्छ । चारो हाल्ने, सरसफाइ गर्ने, मरेका माछा निकाल्ने गर्दैमा सबै दिन यसैमा बितेको थाहै हँुदैन । ’
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरेको जग्गा आन्दोलन पछाडि फुकुवा भएपछि माछापालन सुरु गरिएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सिमसार खेत भएकाले पहिले पनि धान खेती राम्रै हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो तर, धानखेतीमा मात्र सीमित हुनुभन्दा अन्य व्यवसाय गर्ने सोचले माछापालन सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘धान मात्रै कति लगाउनु ? पहिले जस्तो अधिया लगाउने मान्छे पनि नपाइँदैन । धानखेतीमा खर्च हुने समयमा अलि ध्यान दिने हो भने राम्रै कमाई गर्नसकिन्छ भनेर चार वर्ष भयो माछापालन सुरु गरेको हुँ’, भण्डारीले भन्नुभयो, ‘जग्गा बाँझो राख्नुभन्दा यो व्यवसाय धेरै राम्रो लाग्यो । काम गर्नसक्ने हो भने यसबाट पनि राम्रै आम्दानी भइरहेको छ । ’
यहाँ बनाइएका चारवटा पोखरीमा दुई लाख साढे २७ हजार माछाका भुरा राखिएको छ । सबै माछा शम्शेरगञ्जबाट ल्याइएको हो । माछाका भुरामै लाखांैको लगानी गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो ।
पानीको मात्रा, चारो र राम्रोसँग हेरचाह गरिएका माछाहरू छ महिनापछि नै बिक्री गर्न मिल्ने हुन्छन् तर, पोखरीमा राखिएका भुरामध्ये धेरैलाई बचाउन नसकिने समस्या हुने भण्डारीले बताउनुभयो । ‘यो व्यवसायमा सबैभन्दा अप्ठेरोको कुरा भनेकै भुरालाई बचाइराख्नु हो । ’ भण्डारीले एक सिजनमा करिब ७५ लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । दुई लाख साढे २७ हजार माछाका भुरामध्ये एक लाख ५० हजार बचाउन सके पनि एक सिजनमा ७५ लाख रुपियाँँ आम्दानी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रायः सबै माछाहरू दाङकै बजारमा खपत हुन्छ । कहिलेकाहीँ मात्र सल्यानसम्म माछा पु¥याउने गरेको भण्डारीले बताउनुभयो ।
आफ्नै लगानी र सीपले माछापालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएका भण्डारीले सरकारबाट पाउने अनुदान र तालिम अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको छैन । अरूले गरेको देखेर माछा पाल्न सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । राज्यबाट कुनै सहयोग प्राप्त गर्न सके व्यवसायलाई थप व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
धादिङ दुर्घटनामा मृतकर्को संख्�